MTS मा इन्टर्नेट यातायात को सन्तुलन कसरी जाँच गर्ने? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
एमटीएसमा इन्टरनेट ट्राफिकको सन्तुलन कसरी जाँच गर्ने?
मोबाइल टेलि सिस्टमको अपरेटरका लागि, यी उद्देश्यहरूको लागि विशेष सेवा प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ - MTS सेवा, तर त्यहाँ अन्य तरिकाहरू पनि छन्, उदाहरणका लागि, आदेश * १०० * २ # वा * १०० * १ # डायल गर्नुहोस् र त्यसपछि कुञ्जी थिच्नुहोस्। प्रतिक्रियामा, इन्टरनेट ट्राफिकको सन्तुलनको बारेमा जानकारी आउँदछ। एमटीएसमा खाता पुनःपूर्ति गर्न कस्तो प्रकारको एसएमएस पठाउन?
इन्टरनेट ट्राफिकको सन्तुलन जाँच गर्नका लागि टन, तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा त्यस्ता संख्या र संकेतहरूको संयोजन प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ ** १११ **२१217 # र कल थिच्नुहोस्।
तपाईलाई एसएमएस सन्देश पनि पठाउन सक्नुहुन्छ 5340, जसको पाठमा तपाईले केवल साइन मात्र राख्नु पर्छ? यो सन्देश नि: शुल्क हो र केही समय पछि तपाईले एमटीएसमा इन्टरनेट ट्राफिकको सन्तुलन के हो भनेर आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईको बाँकी एमबी इन्टर्नेट तपाईको MTS युक्रेन प्याकेजमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै संयोजन टाइप गरेर ** १११ **२१103 # र कल थिच्नुहोस्।
तपाईंको मोबाइल फोनमा * १११ * २१111 # संयोजन प्रविष्ट गर्नुहोस् र कल प्रेस गर्नुहोस्।
अर्को विकल्प एउटा एसएमएस सन्देश हो जुन प्रश्न मार्क उद्धरण ;? quot; को समाग्री हो, जुन 5340 XNUMX० मा पठाइनु पर्छ। निश्चित समय पछि तपाईले अनुरोध गरिएको जानकारी सन्देशमा पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यदि तपाईंसँग युक्रेनको MTS छ, उही गर्नुहोस्, केवल संयोजन भिन्न छ - * १०१ * १०101 # + कल बटन।
तपाईं MTS मा इन्टरनेट ट्राफिकको सन्तुलन धेरै तरिकाहरूमा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ:
एउटा अनुरोध पठाउनुहोस् * १११ * २१111 # र कल कुञ्जी थिच्नुहोस्।
इन्टर्नेट सहायकको लागि दर्ता गरेर, तपाईं केवल बाँकी इन्टरनेट पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, तर सामान्यतया तपाईंको खाता पनि नियन्त्रण गर्नुहोस्, साथै जडान र विच्छेदन सेवाहरू।
MTS अपरेटरबाट बाँकी ट्राफिक पत्ता लगाउनको लागि, एकले फोनमा x111x217 # संयोजन प्रविष्ट गर्नुपर्छ र कल बटन थिच्नुहोस्।
युक्रेनका बासिन्दाहरूको लागि, तपाईं x111x103 # डायल गरेर फोनमा कल कुञ्जी फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं इन्टरनेट सहायक पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ सिमकार्डको माध्यमबाट जाने बाँकी इन्टरनेट ट्राफिकको मतलब हो भने, तपाईले * १०० * २ # संयोजन र फोनबाट कल कुञ्जी डायल गर्न सक्नुहुन्छ, बाँकी प्याकेट एसएमएसको रूपमा पठाइने छ वा तपाइँको मोबाइल फोनको स्क्रिनमा प्रदर्शित हुनेछ।
र यहाँ बेलारूसमा MTS ग्राहकहरूको लागि ब्यालेन्स जाँच गर्न विकल्पहरू छन्। आधिकारिक पृष्ठबाट लिइएको जानकारी। तपाईं दुबै इन्टरनेट सहायक र मोबाइल सहायक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, वर्तमान ब्यालेन्स जाँच गर्न अन्य अवसरहरू छन्।
तपाईं आफ्नो मोबाइल फोनबाट तपाईंको मोबाइल अपरेटरलाई अनुरोध पठाएर MTS मा इन्टरनेट ट्राफिकको ब्यालेन्स जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। यो गर्न, डायल गर्नुहोस् * १११ * २१111 # र कल बटन थिच्नुहोस्। चाँडै तपाइँले खाता ब्यालेन्सको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ।
MTS मोबाइल अपरेटरको बाँकी ट्राफिक पत्ता लगाउन सजिलो छ यदि तपाईले फोनमा * १११ * २१111 # नम्बरको संयोजन डायल गर्नुभयो भने। फोन प्रकार्यको समर्थन बिना ट्याब्लेटबाट तपाईले MT आधिकारिक वेबसाइटमा गएर तपाईको ट्राफिक पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र बाँकी ट्राफिकको बारेमा विस्तृत जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ र अन्य सेवाहरू प्रबन्धन गर्नुहुन्छ, तपाईको व्यक्तिगत खाताबाट भुक्तान गर्नुहोस्।
मैले सँधै मेरो कम्प्युटरमा एउटा विशेष प्रोग्राममार्फत जाँच गरें, यदि तपाईं मोडेम मार्फत MTM मा जडित हुनुहुन्छ भने, मेनूमा उद्धरण बटन हुन्छ; ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस्;, खातामा नगद ब्यालेन्सको राशिको साथ एक एसएमएस तुरून्त आउँदछ ...
व्यक्तिगत रूपमा, मेरो फोनमा मेरो क्षेत्रको असीमित मिनी, बाँकी ट्राफिक जाँच गरीएको छ * १११ * २१111 #। तर म MTS आधिकारिक वेबसाइट मा सम्पर्क गर्न सिफारिस गर्दछु, किनकि प्रत्येक क्षेत्र र देशको आफ्नै नियम हुन सक्छ। हुनसक्छ तपाईंले फरक संयोजन प्रविष्ट गर्न आवश्यक पर्दछ।
MTS मोबाइल अपरेटरमा इन्टरनेट ट्राफिकको ब्यालेन्स जाँच गर्न, म निम्न नम्बर संयोजन डायल गर्दछु - * १११ * २१111 # र कल कुञ्जी थिच्नुहोस्। खैर, यदि मलाई कसरी र के जाँच गर्ने थाहा छैन, म सेलुलर कम्पनीको अपरेटरलाई बोलाउँदछु, जहाँ म मेरो रुचिको प्रश्न सोध्छु।
इन्टरनेट सेवाहरूमा ट्राफिकको बाँकी जाँच गर्न, तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जानुपर्नेछ र बाँकी निर्दिष्ट गर्नु पर्छ।
वा फोन एस्ट्रिस्क १११ तारांकित २ जालीमा निम्न संयोजन टाइप गरेर, कल कल थिच्नुहोस्। SMS आउनेछ।